Raw Testosterone Enanthate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7)
Testosterone enanthate inorondedzerwa seAAS nokuti inoshandiswa pakugadzirwa kwe testosterone uye testosterone pro-zvinodhaka, zvinoreva kuti inokurudzira muviri kubudisa testosterone pachayo. Nezvo izvo zvataurwa, zvine simba uyerogenic zvinowedzera uye inongororetsa anabolic madhara.
Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) video
Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) Tsanangudzo
Raw Testosterone Enanthate powder, inotengeswa pasi pezita rinonzi Delatestryl pakati pevamwe, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kunyanya mukurapa kwepasi pasi e testosterone mumarume, uye yakanonoka kuberekwa kwevakomana, uye kenza yemazamu muvakadzi . Inoshandiswawo mune hormone therapy ye transgender varume. Inopiwa nejisi mu musumbu kazhinji kamwe kamwe kwemavhiki maviri kusvika mana.
Mukuwedzera kumashandisirwo ayo ekurapa, Testosterone Enanthate powder inoshandiswa kuvandudza muviri uye kushanda. Chirwere ichi chinhu chinodzora munyika dzakawanda uye saka kusashandiswa kwemishonga kazhinji hakubvumirwi.
Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) Specifications
Product Name Raw Testosterone Enanthate powder
Kemikari Name Testosterone heptanoate; Testosterone enantate; Testosterone heptylate; Androtardyl
muchiso Name Delatestryl
Kirasi yeMishonga androgen and anabolic steroid, Androgen ester
CAS Number 315-37-7
InChI Key VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Molecular Wsere 400.59
Monoisotopic Mass 400.298 g / mol
Kunyorera Point 34-39 ° C
Freezing Point Kwete dheinhare iripo
Biological Half-Life Kuparadzanisa hafu-hupenyu ndeye (Tsandanyama) 4-5 mazuva
ruvara White crystalline powder
Skukodzera Kusasvibiswa mumvura
kunyoresa An Androgen. bodybuilding
Chii chakakosha Testosterone Enanthate powder (315-37-7)?
Testosterone enanthate powder rudzi rwe androgen mishonga, uye inogadzirwa senyuchi ye testosterone proprionate uye testosterone enantate .Testosterone enanthate powder inozivikanwawo se testosterone heptanoate, i anabolic uye androgenic steroid (AAS) zvinodhaka zvinoshandiswa kurapa mazinga e testosterone. Anabolic zvinodhaka zvinoshanda kuburikidza nekuvaka masumbu, asi androgenic inoreva kukurudzirwa kwevanhukadzi zvepabonde.
Iyo Yakakura Sei Testosterone Enanthate powder (315-37-7) mabasa
Testosterone enanthate powder is andro genic uye anabolic steroid iyo inoshandiswa mukurapa maitiro epasi e testosterone. Zvinorevei ndezvokuti zvinogona kushandiswa kune zvose pakuvakwa kwemisungo uye nekuwedzera hukama hwepabonde hwevarume. Inoita izvi kuburikidza nekushandurwa kwe Testosterone iyo inogona kuva yakaderera mumuviri.
Mazuva ano vakawanda varimi vari kushandisa Testosterone enanthate powder mukukurumidza kupora, kupisa mafuta uye mukuvakwa kwemisungo. Chinoita kuti chizikanwe kubudirira kwayo kune avo vanoishandisa vanozvitora pachavo kana kuti vanozviisa mu steroid yavo stacking.
Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) Dosage
Testosterone enanthate inoratidzika kana yakasviba inonzi fluctuid fluid inonzi 5-milliliter (mL) yakawanda yekushandisa girazi. Inoraswa intramuscularly mumabviko kwemavhiki ose kusvika mana. Kuti urege kudzika mahomoni (uye mafungiro akafanana), zviduku zvinowanzosarudzwa pamusoro pezvishoma.
Iyo inoshandiswa zvinodhaka, iyo inomiswa muwesameamu mafuta, ine nguva yakasunungurwa yakasununguka kwemavhiki maviri kusvika matatu. Dhigiriyo inogona kusiyaniswa nemunhu asi inowanzonyorwa seyizvi:
Male hypogonadism: 50 kusvika ku400 milligrams (mg) mavhiki maviri kusvika mana
Yakaderera kusununguka kwevarume: 5 kune 200 mg kwevhiki mbiri kusvika kune ina kwemwedzi mina kana mitanhatu
Chirwere chematenda cheMetastatic: 200 kusvika ku400 mg kwevhiki mbiri kusvika kune ina
Transgender hormone therapy: 50 kusvika 200 mg kwevhiki kana 100 kusvika 200 mg vhiki mbiri
Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) Kushandisa
Testosterone enanthate powder zvinokonzerwa neye testosterone acetate, iyo inosanganisira kukurudzira kukura kwezvikadzi zvepabonde uye zvepabonde zvepabonde uye kurwisa isrogen. Testosterone enanthate powder inewo mapuroteni anogadzirisa migumisiro, iyo inobvumira kuti ibatsire musimba kukura uye kuwedzera kuwedzera. Testosterone enanthate powder inogona kudzivirira gland pituitary uye kukurudzira kuita zvepabonde zvekurara, zvichideredza testosterone isingagumi yakavanzwa nemasero eLeydig, ayo anozadzisa chinangwa chekumisa spermatogenesis.
Testosterone enanthate powder inogona kushandiswa sehurefu kwenguva refu yekuberekwa kwechirwere chemishonga. Ndiro kliniki inoshandiswa kurapa hukama hwevanhu hune hypogonadism uye gonadal kusakwanira, chirwere chepabonde hypogenesis, kusabereka, eunuchism, uye cryptorchidism. Inogonawo kushandiswa kurapa hutachiona husina kunaka hunopa ropa, menopausal syndrome, kenza yemazamu uye chirwere chekuberekwa. Inogonawo kubata chirwere chesrhosis, aplastic anemia, osteoporosis nedzimwe zvirwere zvinoparadza.
Tenga Testosterone Enanthate powder kubva kuBuasas.com
Kusiyana Kwakaipisisa Pakati Pekuedzwa Kuyananisira uye Kuedzwa Tsitsi
Testosterone: Action- Dambudziko-Kuchinja, rakagadzirirwa naEberhard Njeschlag, Hermann M. Behre, peji 417, 533-560
Williams Bhuku reEstocrinology E-Book, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, Peji 759-780
Anabolic-Androgenic Steroids, yakagadziriswa naCharles D. Kochakian, peji 46-60
Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6)
Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2)